Miracolo di Padre Pio: Infarto, "in sala intensiva ho visto un monaco che pregava per me" | Ilblogdellapreghiera
Ọrụ Ebube nke Padre Pio: nkụchi obi, "n'ime ụlọ kpụ ọkụ n'ọnụ m hụrụ onye mọnk na-ekpe ekpere maka m"
Paolo Tescione	Edere ya Eprel 30, 2020 Eprel 30, 2020
A kọọrọ anyị akụkọ ahụ Pasquale, 74, mgbe ọ gbara afọ iri isii ma nwee nkụchi obi wee buru ya gaa ụlọ ebe ihe mberede dị.
Mgbe obere oge gasịrị, ọ chọtara onwe ya n'ime ụlọ kpụ ọkụ n'ọnụ. Pasquale gwaziri anyị: "Ahụrụ m onye mọnk na-acha ọcha na-acha uhie uhie n'akụkụ m na-amụmụrụ m ọnụ ma na-agụ Rosary".
Mgbe ahụ, Pasquale gbakere site n'ọnọdụ ọjọọ ahụ yana onye ekweghị na Chineke nke ghọrọ onye na-ekpe Katọlik mgbe ahụ.
Mgbe akụkọ a mara mma anyị na-ekpegara San Pio ekpere ịrịọ maka enyemaka na nchebe ya.
TRIDUUM TO PADRE PIO
O Padre Pio nke Pietrelcina, onye buru ihe iriba ama nile nke nmekpa obi nke Onye nwe anyi Jisos Kraist n’anu gi. Gị onye buuru anyị niile, na-atachi ahụhụ nke anụ arụ na nke omume nke dakwasịrị gị ahụ na mkpụrụ obi na oge na-aga ịnwụ anwụ, na-arịọchitere Chukwu ka onye ọ bụla n’ime anyị mara otu esi anabata ịnya isi na ndụ niile, na-agbanwe ahụhụ ọ bụla. njikọta nke ejikọtara anyị na Ndụ Ebighị Ebi.
«Ọ ka mma ịta ahụhụ, nke Jizọs ga - achọ izitere gị. Jizọs onye na - enweghị ike ịta ahụhụ iji jide gị na nhụjuanya, ga - arịọ gị arịrịọ ma kasie gị obi site n'ịkụnye mmụọ ọhụrụ n'ime mmụọ gị. Nna Pio
O Padre Pio nke Pietrelcina, onye gi na Onye nwe anyi Jisos Kraist, gi nwela ike iguzogide onwunwa nke ajo onye ahu. Gị onye tara ahụhụ ma nwudo nke ndị mmụọ ọjọọ nke chọrọ ịmanye gị ịhapụ ụzọ nke ịdị nsọ gị, juo Onye Kachasị Elu ekpere ka anyị onwe anyị na enyemaka gị na nke Eluigwe niile, ga-enweta ike ịgọnahụ ka anyi mee mmehie ma debe okwukwe rue ubochi onwu anyi.
«Nweenụ obi ma atụla egwu oge iwe nke Lucifer. Chetanu rue mgbe ebighi ebi: na obu ezigbo ihe ngosi mgbe onye iro na ebighari ma megharia uche gi, ebe nkea gosiri na o no n’ime. ” Nna Pio
O Padre Pio nke Pietrelcina, onye hụrụ nne nne ya n'anya nke ukwuu ịnata otuto na nkasi obi kwa ụbọchị, na-arịọchitere anyị nwanyị ahụ dị nsọ site n'itinye mmehie anyị na ekpere oyi n'aka Ya, nke mere na dịka na Kena nke Galili, Nwa wee si nne m, e nwekwara ike ide aha anyi na akwukwo nke ndu.
«Ka Meri bụrụ kpakpando, ka ị wee mee ka ụzọ ahụ dị mfe, gosi gị ụzọ dị mma isi gakwuru Nna nke Eluigwe; Ka ọ bụrụ arịlịka, nke ị ga - esonye na nso nso a n'oge ikpe ". Nna Pio
← Na post gara aga Gara aga post:Eprel 30, 2020, Medjugorje: Anyanwụ tụgharịrị wee gbanwee agba na-agwa anyị ihe nwa agbọghọ dị afọ 8 gbara
Ọzọ Post → Post ozo:Medjugorje: Onye ọhụ ụzọ Jacov na-ekpughere anyị ihe nzuzo nke Madonna nyere